Sidee baa loo fuliyaa la wareegidda iyo daryeelka ku meelgaarka ah? - Lastensuojelu.info
La wareegidda waxaa lala diyaariyaa sida wadajir ah qoyska
La wareegiddu waa borosees dheer oo sida caadiga ah si wadajir ah loola diyaariyo qoyska. Inta badan gaarista go’aanka la wareegista waxaa laga gaaraa iyadoo la fahansiiyey qoyskii iyo ilmihii.
La wareegidda waxaa lagu qeexaa sababteeda iyadoo qoraal ah. Shaqaalaha badbaadadda carruurta ayaa uruurinaya wax walboo saameyn ku leh arrinka, sidoo kalana dhageysanaya fikirka qoyska. Sababaha la wareegiduna waa iney ahaadaan:
waa in la sheegaa siday ilmaha nabadgelyadiisu khatar u gashay
waa in la sheegaa sida la isugu dayey in ilmaha la caawiyo iyo sababta ay siyaabahani ugu filnaan waayeen in ilmaha la caawiyo
waa in la sheegaa siday la wareegiddu u caawinayso ilmaha iyo sababta ay la wareegiddu ugu fiican tahay ilmaha oo ugaga fiican tahay inuu gurigiisa joogo
Waalidka iyo ilmuhu waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan waxyaabaha dukumeentiyada ku qoran ee la leeyahay la wareegidda ayey sabab u yihiin. Sidoo kalana waa in loo qabanqaabiyaa kullan, kaasoo loogu sharaxayo sababaha la wareegitaanka.
Mararka qaar waxaa khasab noqota in la wareegidda la sameeyo, iyadoo qoysku uu ka soo horjeedo
Haddii waalidka ama ilmaha oo 12 sano u buuxsantay ay ogolaan waayaan la wareegidda, maxakamadda ayey noqonaysaa inay arrinta go’aan ka gaarto. Gudiga cadaaladda ayaa arrinka ka baaraan degaya go’aaminayana, waxa ilmaha dantoodu ku jirto. Go’aanka gudiga cadaaladda waxaa racfaan looga qaadan karaa maxkamadda sare.
Arrimaha is maandhaafka ah oo dhan waa in shaqaalaha arrimaha bulshadu kala xaajoodaa qoyska. Taasina waxaa loola jeedaa, in ilmihii iyo qoyskiiba loo sheego go’aanka kala wareegista ee la gaarey, shaqaaluhu waa iney sidoo kalena u sheegaan go’aanka cidey racfaanka oga qaadan karaan iyo sidey uga qaadanayaan racfaanka.
La wareegiddu waa arrin mar walba dhib badan oo aan sahlanayn, ujeedada laga leeyahayna ma aha in cidna wax loogu dhimo oo lagaga soo horjeesto, ee waa in la caawiyo ilmaha iyo qoyskiisa.
Ilmaha lala wareegay wuxuu u guurayaa qoys ku meelgaar ah ama xero badbaadada carruurta oo lagu hayo carruurta.
Daryeelka ku meelgaarka ah macnihiisu waa ilmaha lala wareegey ee lagu daryeelayo meel aan aheyn gurigiisa. lmaha lala wareegey wuxuu sida caadiga ah ku nool yahay qoys ku meelgaar ah , ama guri qoyseed xirfadeaysan ama xero badbaadada carruurta ah . Intaan ilmaha lagu meelayn meel kale oo gurigiisa ka baxsan, shaqaalaha badbaadada carruurtu waa inay soo ogaadaan in qof ilmaha ehelkiisa ka mid ah uu hayn karo ilmaha.
In marka la dooranayo meesha ilmaha lagu meelaynayo ee lagu haynayo, hadday suuragal tahay la tixgeliyo ilmaha asalkiisa luuqad ahaaneed, dhaqan ahaaneed iyo diin ahaaneed.
Ilmaha waa in loo sheegaa sababaha keenay in lala wareegay iyo hadafyada laga leeyahay daryeelka meelaynta. Ilmaha waa inay si ku filan ugu suurowdaa inuu la kulmo qofka shaqaalaha sooshalka ah ee arrimihiisa u xilsaaran. Ilmuhu wuxuu sidoo kale xaq u leeyahay inuu la kulmo oo la xiriiro waalidkiis iyo dadka kale ee ehelkiisa ah. Waxyaabahan oo dhan waxaa lagu qoraa ilmaha qorshihiisa macaamiisha. Kulamada iyo wada xiriiridda waalidka waxaa la xadidi karaa oo keliya, haddii ay dhibaato cad u keenayaan ilmaha. Markaasna xadidaada waa in laga gaaraa go’aan, kaasoo abiil laga qaadan karo. Ilmaha da’diisu 12 sano gaartey wuxuu xaq u leeyahay inuu hadduu rabo diidi karo inuu la kulmo waalidkiis.
La wareegiddu waxay soconaysaa ilaa intuu ilmuhu u baahan yahay oo dhan
La wareegiddu waxay socotaa ilaa wakhti aan gaar loo caddayn, taas macneheedu waa la wareegiddu waxay soconaysaa ilaa intuu ilmuhu u baahan yahay oo dhan. Intay la wareegiddu soconayso waxay ku xiran tahay tusaale ahaan siday waalidku u awoodaan inay uga soo baxaan arrimahooda iyo siday naftooda u daryeelaan wakhtiga lagu jiro meelaynta. Inta lagu jiro wakhtiga la wareegiddu socoto, badbaadada carruurtu waxay isku daydaa inay ilmaha iyo qoyska u qabanqaabiso waxqabadyada taageerada ee wax lagaga qaban karo siduu ilmuhu gurigiisa ugu soo noqon lahaa. Shaqaalaha qaabilsan ilmaha arrimihiisa waxaa waajib ku ah inuu ugu yaraan sannadkiiba mar qiyaaso in loo baahan yahay, in la wareegidda la sii wado iyo in halkaa ay ku egtahay. La wareegista waxay ku egtahay ugu danbeyn markii ilmuhu buuxiyo 18 jir oo uu qaangaaro.
Qeybi barta kullanka
Fiirso sidoo kale